सहकारीमा संस्थागत सुशासनको पहल
२०७७ कार्तिक, २५
अर्थमन्त्रालयले ठूला खालका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय सुशासन कायम गराउने कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक कार्य विभागले गत शुक्रबार सहकारी विभागलाई पत्र लेखेर संस्थागत सुशासन सुधार गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ । विभागले केही समयअघि कान्तिपुर, मिलन, ओरिएन्टललगायतका ठूला सहकारीको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि ती सबै सहकारीहरूका वित्तीय अराजकता रहेको भन्ने आशयसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बुझाएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन र ती सहकारीहरूमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर विभागले कारबाहीमा ढिलाइ गरेपछि मन्त्रालय आफैले ताकेता गरेको हो । मन्त्रालयको आन्तरिक कार्य विभागका प्रमुख सहसचिव टंकमणि शर्माले ठूला सहकारीहरूमा सुशासन कायम गराउन कारबाही सुरु गरिने जानकारी दिए ।
पर्यटन वर्षका लागि २२ करोड माग
नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष २०११ का लागि रू. २२ करोड माग गरेको छ । पर्यटन वर्षमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूका लागि रू. २२ करोड आवश्यक पर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा सो रकम समावेश गर्न अनुरोध गरिएको बोर्डका निर्देशक सुवास निरौलाले बताए ।
चालू आवमा पर्यटन वर्षको तयारीका लागि रू. २ करोड तथा अघिल्लो वर्षमा रू. १ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।